China Top Quality XGN15-12 Igbe ụdị edozi AC metal mechiri sọlfọ Hexafluoride Loop Switchgear Factory na-emepụta na ndị na-ebubata ngwaahịa |Shengte
Ụdị igbe dị elu XGN15-12 Emechiri AC igwe mechiri emechi Sulfur Hexafluoride Loop Switchgear Factory
XGN15-12 igbe ụdị edozi AC metal gbachiri sulfur hexafluoride ring switchgear (SF6 switchgear) bụ ngwaọrụ nkesa ime ụlọ nwere akụkụ atọ nke 12Kv yana ugboro nke sistemụ ụgbọ ala 50Hz.
A na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe obibi, ụlọ elu dị elu, grids ike obodo na ebe ndị na-ekesa njedebe, igbe igbe.
A na-etolite etiti kabinet mgba ọkụ SF6 site na-ehulata efere igwe A3 nkịtị (ma ọ bụ kpuchie ya na aluminom-zinc efere) n'ime profaịlụ.Ọ nwere ọdịdị mara mma, nguzogide corrosion siri ike na kọmpat na usoro ezi uche dị na ya.
Enwere ike ịgbasa ya site na nchikota ọ bụla dịka ihe dị iche iche chọrọ.Ọ dị ngwa ma dị mfe iji kpokọta ma dị mfe ịwụnye.
Enwere ike kewaa SF6 switchgear arụpụtara ma gbakọta n'ụzọ ziri ezi n'ime ụlọ ụgbọ ala, ụlọ mgba ọkụ, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, ụlọ akụrụngwa na ọnụ ụlọ USB.
Enwere ike ịgbasa isi ụgbọ ala nke ọnụ ụlọ ụgbọ ala n'akụkụ nke ọ bụla n'amaghị ama.Enwere ike iji mgbanaka atọ mee ya ka ọ bụrụ ngalaba netwọkụ mgbanaka, ma ọ bụ nwee ike ịgbatị ya na ọdụ ọdụ ọdụ nwere ihe karịrị mgbanaka anọ.
A na-emechi sf6 load mgba ọkụ usoro kọntaktị na arc extinguishing ụlọ na insulating gbọmgbọm wụsara site epoxy resin APG usoro, na jupụta SF6 gas nke 0.045 MPa.N'ihi njikọ akara ole na ole, ọ nwere ike idowe ntapu ikuku ruo ogologo oge ma zere mmezi n'ikpeazụ.
The atọ-adọ na-akpụ akpụ kọntaktị nke F. ibu mgba ọkụ na-ofu on a insulated spindle, nke na-aghọta mgbanwe nke atọ na-arụ ọrụ ọnọdụ nke mmechi, oghere na grounding n'okpuru edinam nke mmiri usoro.Ọ bụ ngbanwe ibu ibu nke nwere ọnọdụ atọ.
The analọg isi sekit na usoro panel na oghere na mmechi egosi kpọmkwem ejikọrọ na isi aro nke ibu mgba ọkụ nwere ike igosi n'ụzọ doro anya na mmechi, mmechi ma ọ bụ grounding ọnọdụ nke ibu mgba ọkụ.
Iji gbochie mmejọ, enwere ike itinye ihe mkpuchi na oghere oghere na-arụ ọrụ nke usoro ahụ.
Enwere ike itinye ihe nrịbama ikuku gas SF6, kọntaktị inyeaka, mkpuchi njem, ngwaọrụ ọrụ eletriki, sekit njikwa, ngwaọrụ nha na ngwaọrụ nchebe relay dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
Ụlọ ọrụ SF6 nwere ike imekọ ihe na usoro mmiri CTI gbakwunyere FLN sulfur hexafluoride load switch (F cabinet) ma ọ bụ CTII okpukpu abụọ nke mmiri yana FLN sulfur hexafluoride load switch-fuse mix ngwa (FR cabinet).
A na-ekewa ọnụ ụlọ nke ọ bụla nke ọdụ ụgbọ mmiri site na efere ígwè, ma ụlọ nke ọ bụla nwere ihe ọkụ ọkụ.A kwadebere elu G nke transformer nwere ngwaọrụ iyuzucha akpaka iji mezie
Nkuku koodu nkuku nwere akụkụ atọ pụrụ iche ọ bụghị naanị na-eme ka ike na isi ike nke etiti ahụ n'onwe ya dịkwuo mma, kamakwa ọ na-emezi akụkụ ziri ezi nke etiti ahụ.
Fuse with impactor, ihe ọ bụla na-eme mmetụta mmetụta, na-akpalite ngwaọrụ njikọ njikọ, bụ mmeghe mgba ọkụ.
Mkpuchi nke na-eme ka voltaji na-ahazi ụgbọ ala alaka nwere ike ime ka ọkụ eletrik bụrụ otu ma zere mmejọ dị n'ime.
A na-eji fuse na njedebe njikọ eriri na-eji mma na-agbanye ala, nke ejikọrọ na ngbanwe nke ibu.
Usoro mmiri na-arụ ọrụ mmiri na-ejikọta ọnụ na nnukwu voltaji cableroom iji gbochie ọnụ ụzọ n'ihu imeghe mgbe mgba ọkụ adịghị adabere na iji hụ na nchekwa nke onye ọrụ.
Igwe ọkụ zuru oke nwekwara ike nabata ndị na-ejide àmụmà, ihe ngbanwe dị ugbu a, ihe ngbanwe voltaji na ihe ndị ọzọ.
Ọnụ ụzọ dị n'ihu nwere windo nlele na ngwaọrụ mkpuchi nchekwa, dị mma ma mara mma maka nbudata na ibutu.
Enwere ike jikọọ eriri USB ozugbo na oche fiusi n'okpuru fiusi, ma ọ bụ na mmanya ọla kọpa nwere tin n'okpuru oche fiusi.Ụdị njikọ abụọ nke eriri eriri na-eme ka njikọ nke otu-isi ma ọ bụ atọ isi na isi eriri mkpuchi kachasị mfe.
Mgbe enwere mmejọ nke ime n'ime ụgbọ ala na ụlọ USB nke T. switches, onye na-anakọta nrụgide nchekwa ntụziaka ga-eduzi okpomọkụ dị elu na nrụgide gas dị elu n'èzí ụlọ, na-ahụ n'ụzọ zuru ezu na nchekwa nke ndị na-arụ ọrụ na ngwá ọrụ ndị ọzọ.
Ejikwa fuses ndị dị ala, ngwaọrụ nchebe relay, na kaadị eletrọnịkị rụọ ọnụ ụlọ akụrụngwa.Ọ bụrụ na akụkụ ahụ ezughị oke, enwere ike ịgbakwunye igbe ngwá ọrụ n'elu ụlọ ahụ.
Cable mwekota na kwesịrị ekwesị size nke mkpuchi mkpuchi na bracket maka cable ụlọ ala.
Mba. Aha Nkeji Ọnụọgụ Okwu
1 Egosiri voltaji KV 12 F, FR
2 Ugboro ugboro HZ 50 F, FR
3 Enyere ugbu a A 630 F, FR
4 Igwe ọkụ kachasị elu A 125 F, FR
5 Egopụtara obere oge na-eguzogide ugbu a KA 25 F
6 Ogologo oge sekit dị mkpụmkpụ S 4 F
7 Enyere ogo kacha elu enwere ike ịnabata ugbu a KA 63 F
8 Enyere obere sekit mmechi ugbu a KA 63 F
9 Enyere ọkwa na-agbaji ugbu a ibu na-arụ ọrụ A 630 F
10 Ọkụ na-agbaji emechiri emechi A 630 F
11 Ịchaji eriri USB akwadoro ugbu a A 10 F
12 Isi ihe mgbochi sekit μΩ ≤ 150 F
13 Nyefee ugbu a A 1700 FR
14 Enyere oke mgbawa sekit dị mkpụmkpụ KA 50 FR
15 Isi mgbagha azụ sekit (Enweghị Fuse) Ọ ≤250 FR
16 Otu anya mm 210±5 F, FR
17 Ogologo ike arụ ọrụ kacha Na-emechi Nm 8-100 F, FR
18 Ogologo ike arụ ọrụ kacha Na-emechi Nm 8-100 Arụ ọrụ ala
19 Enyere ọkwa ngbanwe nke obere oge dị ugbu a KA 25 F
20 Ogologo oge sekit dị mkpirikpi nke mgba ọkụ ala S 3 F
21 Nkwenye ọnụ ọgụgụ kacha elu ugbu a nke Mgbanwe Grounding KA 63 F
22 1 min kwadoro ugboro ike obere oge na-anagide voltaji Interphase na ikwu KV 42 F, FR
Mgbaji dịpụrụ adịpụ 48
23 Enyere ọkụ ọkụ na-akpali voltaji na-adịgide adịgide Interphase na ikwu KV 75
Mgbaji dịpụrụ adịpụ 85
24 Ndụ mechanical Ibu ngbanwe 次 2000
Na-ekewapụ mgba ọkụ 2000
25 Ọkwa nchebe IP3X
Nke gara aga: Kachasị mma KYN28A-12 Ime Metal Armored Pullout Switchgear Supplier
Osote: Ọnụ ahịa n'ogbe maka HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Fixed Metal mechiri emechi Loop Switchgear-shengte